Home Wararka Maanta 26ka Juun waa Maalin Murugo Taagan iyo Xusuus Xanuun Badan oo...
Maanta 26ka Juun waa Maalin Murugo Taagan iyo Xusuus Xanuun Badan oo uu Farmajo Rabo inuu Dumiyo.
Sida dhabtu tahay maanta oo kale waxay ahayd maalin la isu soo hiloobo oo xusuuso qurux badan la isdhaafsiisto, hasa yeeshee ma ahayn maalin aan la is aamineyn oo dhufeys ay isugu jiraan labadii walaalaha ahaa ee gumeystaha kala hayey balse hal mar isu hamuunyooday oo gurigoodii halka ahaa ee lakala qeybiyey dib u mideystay 26 kii Juun 1960.
Siyaad Barre ayaa asaaska u jeexay inay mar kale dillaacdo, Farmajana waa ku sii wadaa inay kala dhacdo oo kala dhimato dibna aan loo kabin. Walaalaha waqooyi oo hangool dheer isaga haya si uusan ugu geysay dhaibaatada mugga leh ee uu Koofurta u geystay isagoo ka shidaal qaadanaya adeerkiis ayaa mahad iyo duco mudan.
Waxaan arkayaa dad sawiradiisa soo saaraya baraha Bulshada oo leh mar kale ma dooran lahayd? Runtii waan naxaa oo meelbaa I go’ada marka aan eraygaas maqlo waayo afar sano ka hor meeshii uu dalka joogay iyo Meesha uu maanta joogo waxaa si cad oo aan mugdi ku jirin kuugu muuqan karaa afar sano kadib halka uu joogi doono. Waxaa laga yaabaa rabbi ma keenee in afar sano kadib aynu aragno toddoba dowladood oo Somali wada sheeganaya oo cusub iyo Gedo oo uu Farmajo dhexjiifo dhilmaayana ku cuneyso oo uu meydka ku sugayo.
Farmajo Madaxda iyo dadka la kulmay waxay ku sheegeen inuu yahay qof soo jeeda oo haddana maqan oo aan Karin xataa inuu magaciisa seddexan saani kuugu sheego ilaa ay u saxaan kaaliyayaasha (carers) ku hareereysan oo markey doonaan ku adeegta si uun isaga loo dembiyeeyo.
Dad badani waxay qabaan inay adag tahay in Farmajo dalka lagu sii daawado waxayna sugayaan inta ay doorashadaan iyadaba lug jiidka ku jirtaa laga qabanayo cidkasta oo ku soo baxdaana Farmajo way dhaameysaa marka Kheyre laga reebo, kaas oo la hubo inuuba ka dari doono.
Taariikhda iyadaa is qoreysa ee halkaan ka daawo ba wixii dhacay oo muuqaal iyo maqal ah.
Kadib halkaan ka daawo waxay ka dhacay magaalada Hargeysa 26kii 1960.